समाउँदा स्तनको आकार बढ्छ ?
41128507 1131061 9320026 30677420
144872 791 44476 99605
एजेन्सी । युवतीको स्तन सुन्दरताको अर्को रुप हो । त्यसैले महिलाहरू स्तनलाई लिएर निकै सर्तक रहन्छन् । महिलाको शरिरको विकास पुरुषको तुलनामा तीब्र गतिमा हुन्छ । स्तन किशोरावस्थाबाट बढ्न सुरु गर्छ । यसको सुरुवात ८ वर्षको उमेरदेखि नै हुन सक्छ ।१३ वर्षसम्मका स्तनले एउटा निश्चित आकार लिइसकेको हुन्छ । २१ वर्षको उमेरसम्ममा स्तनको आकार बढिरहेको हुन्छ । स्तनको एउटा निश्चित आकार भएपछि शरिरका अन्य अंग अनुसार बढ्छ ।स्तन दबाउँदा के असर हुन्छ ? कैयौ मानिसमा स्तन दबाउँदा यसको आकार बढ्दै जान्छ भन्ने मान्यता छ । जुन मान्यतको विकास भएको छ त्यो भ्रम मात्र हो । आजसम्म भएका कैयौं अनुसन्धानले स्तन समाउँदा वा दबाउँदा साइज वा आकारमा कुनै परिवर्तन नभएको देखिएको छ ।यो कारणले पनि बढ्न सक्छ स्तनः यदि कोही महिलाले भारी सामान उठाउँछन् भने वा बच्चा भएपछि स्तनपान गराउँदा स्तनको आकार बढ्छ । यसका साथै कुनै प्रकारको अभ्यास गर्दा पनि स्तनको आकार बढ्छ । यस्तो गर्दा उसको साइज मात्र बढ्ने हो आकारमा कुनै परिवर्तन हुँदैन् ।यस्तो गर्नु खतरानाकः केही महिलाहरू स्तनको आकार बढाउने भन्दै क्रिम तथा अनेक प्रकारका औषधिको प्रयोग गर्छन् । तर यसको प्रयोगले कुनै फरक पर्दैन । बरु हानी पुर्‍याउन सक्छ । केबल ब्रेस्ट सर्जरी गरेर मात्र स्तनको साइज बढाउन सकिन्छ । यसमा सानो पनि गल्ती भयो भने ब्रेस्ट क्यान्सरको खतरा बढी हुन्छ ।के पुरुषले समाउँदा स्तन बढ्छ ? केही मानिसहरू शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि महिलाको स्तन बढ्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर यस्तो केही पनि हुँदैन् । त्यो त केवल सोच्ने मानिसको भ्रम मात्र हो । स्तन समाउँदा वा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा स्तनको आकारमा कुनै परिवर्तन हुँदैन् ।
२२ आश्विन २०७६, बुधबार १८:१९
एजेन्सी । युवतीको स्तन सुन्दरताको अर्को रुप हो । त्यसैले महिलाहरू स्तनलाई लिएर निकै सर्तक रहन्छन् । महिलाको शरिरको विकास पुरुषको तुलनामा तीब्र गतिमा हुन्छ । स्तन किशोरावस्थाबाट बढ्न सुरु गर्छ । यसको सुरुवात ८ वर्षको उमेरदेखि नै हुन सक्छ ।
१३ वर्षसम्मका स्तनले एउटा निश्चित आकार लिइसकेको हुन्छ । २१ वर्षको उमेरसम्ममा स्तनको आकार बढिरहेको हुन्छ । स्तनको एउटा निश्चित आकार भएपछि शरिरका अन्य अंग अनुसार बढ्छ ।
स्तन दबाउँदा के असर हुन्छ ?
कैयौ मानिसमा स्तन दबाउँदा यसको आकार बढ्दै जान्छ भन्ने मान्यता छ । जुन मान्यतको विकास भएको छ त्यो भ्रम मात्र हो । आजसम्म भएका कैयौं अनुसन्धानले स्तन समाउँदा वा दबाउँदा साइज वा आकारमा कुनै परिवर्तन नभएको देखिएको छ ।
यो कारणले पनि बढ्न सक्छ स्तनः
यदि कोही महिलाले भारी सामान उठाउँछन् भने वा बच्चा भएपछि स्तनपान गराउँदा स्तनको आकार बढ्छ । यसका साथै कुनै प्रकारको अभ्यास गर्दा पनि स्तनको आकार बढ्छ । यस्तो गर्दा उसको साइज मात्र बढ्ने हो आकारमा कुनै परिवर्तन हुँदैन् ।
यस्तो गर्नु खतरानाकः
केही महिलाहरू स्तनको आकार बढाउने भन्दै क्रिम तथा अनेक प्रकारका औषधिको प्रयोग गर्छन् । तर यसको प्रयोगले कुनै फरक पर्दैन । बरु हानी पुर्‍याउन सक्छ । केबल ब्रेस्ट सर्जरी गरेर मात्र स्तनको साइज बढाउन सकिन्छ । यसमा सानो पनि गल्ती भयो भने ब्रेस्ट क्यान्सरको खतरा बढी हुन्छ ।
के पुरुषले समाउँदा स्तन बढ्छ ?
केही मानिसहरू शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पनि महिलाको स्तन बढ्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर यस्तो केही पनि हुँदैन् । त्यो त केवल सोच्ने मानिसको भ्रम मात्र हो । स्तन समाउँदा वा शारीरिक सम्बन्ध राख्दा स्तनको आकारमा कुनै परिवर्तन हुँदैन् ।
Prevचिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे राजन भट्टराईको यस्तो विश्लेषण
सीको भ्रमण मिति तयसँगै काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था कडाNext
स्तनपान सम्बन्धी तपाइले नजानेका १० रोचक तथ्य
बर्थडेमा गिफ्ट दिदाँ सम्बन्ध विच्छेद, तर किन ?
सरकारले निशुल्क स्तनको आकर्षण बढाईदिने
मण्डनदेउपुरमा ७ जनासहित काभ्रेमा आज ३१ नयाँ संक्रमित थपिए
मानवअधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्छ– निवर्तमान अध्यक्ष शर्मा
'विदेशमा रहेका नेपालीमा दशैंप्रति आस्था र श्रद्धा धेरै छ' : दिवाकर पन्त, ज्योतिष (भिडियोसहित)
नेपाल ल्युब आयलको २९ औं वार्षिक साधारण सभा
रासायनिक मल आउने क्रम जारी, अब मल अभाव नहुने
नबिल बैंकका अध्यक्षद्वारा शपथ ग्रहण
पहिरोपीडितको व्यथा, 'त्रिपालभित्र जमारा राखेर दशैं'
नेपालमा आजसम्मकै धेरै संक्रमितको मृत्यु, एकै दिन २६ जना थपिए
काठमाडौं उपत्यकामा आजसम्मकै उच्च संक्रमित, ३ हजार १०७ जना थपिए
नेपालमा आज अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमित, एकैदिन थपिए ५ हजार ७४३